Izindaba - Ukunikeza Amandla Okusha Okuluhlaza Nekhabhoni Ephansi nge-BiOPA®
I-Xiamen Changsu Industrial Co., Ltd., inkampani ephethwe yi-Sinolong Group, inika amandla amathuba amasha aluhlaza kanye nekhabhoni ephansi nge-BiOPA®, ifilimu yokuqala ye-BOPA esekwe ku-bio e-China!
lUkuncishiswa Kwekhabhoni Kusuka Kwezinto Ezingavuthiwe
I-BiOPA ayiqapheli nje ukunciphisa i-carbon emthonjeni, kodwa futhi inezinto ezibonakalayo eziseduze kakhulu ne-BOPA, njengamandla aphezulu, ukumelana nokubhoboza okuphezulu, ukuqina okuhle kanye nokuvimbela igesi okuhle, njll. Ngaphezu kwalokho, i-BiOPA iqinisekisweI-TUVfuthi ine-carbon footprint ephansi kakhulu kunepulasitiki yendabuko esekelwe ezinsalela, okuwumnikelo obalulekile ekwehlisweni kwekhabhoni ekupakishweni.
lUkuthuthukisa iGreen Development
Ngazo zombiliukukhishwa kwekhabhoni ephansifuthiukusebenza okuphezulu, I-BiOPA inohlu olubanzi lwezinhlelo zokusebenza emkhakheni wemikhiqizo esetshenziswa nsuku zonke, ukupakishwa kwezimboni, ukupakishwa kwe-elekthronikhi nokunye.Ingahlinzeka ngezixazululo ezisebenzayo nezisimeme zokupakisha kumakhasimende angezansi futhi inikeze isixazululo esisha kumabhizinisi ukufeza izibopho zawo zokunciphisa ikhabhoni.
lUmbono Wokuzijwayeza Wokuthuthukiswa Okusimeme Ngokusungula Kwesayensi Nobuchwepheshe
Njengomphakeli omkhulu kunawo wonke emhlabeni wefilimu ye-BOPA, u-Xiamen Changsu unokuhlonishwa okuningi kazwelonke kanye nezimpumelelo, uphumelele inqubo yokukhiqiza ifilimu ye-BOPA ephelele nethuthuke kakhulu, wazuza impumelelo kanye nokugxuma kwezobuchwepheshe obuningi obuyisisekelo, futhi wahola enanini lamalungelo azimele empahla yengqondo. kanye namalungelo obunikazi.Ngaso leso sikhathi, i-Xiamen Changsu iyimboni kazwelonke eluhlaza kanye nebhizinisi likazwelonke lokuphatha i-green supply chain.Izinikele ekuhloleni okusha kanye nocwaningo lobuchwepheshe oluwumgogodla emkhakheni wezinto eziluhlaza kanye nekhabhoni ephansi nokuluhlaza futhi azikho izinto zekhabhoni.